नेपाल आज | तनावले यौन उत्तेजनामा कमी !
तनावले यौन उत्तेजनामा कमी !
सोमबार, १६ फागुन २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (TK)
यौन र यौन जीवनका विभिन्न पक्षबारे नेपाली समाज राम्ररी खुल्न सकेको छैन । कतिपयका निम्ति सेक्स विशुद्ध शारीरिक कर्म हो । तर, यसको मनोवैज्ञानिक आयाम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यही तथ्य नबुझिदिँदा विभिन्न समस्या आइलाग्छन् । हाल थुप्रै पुरुष (केही हदसम्म महिला पनि) ले भोगिरहेको पीडा हो– उत्तेजना समस्या, जसलाई मेडिकल भाषामा ‘इरेक्टाइल डिसफंक्सन’ भनिन्छ । अलिकति मनोपरामर्शले, अलिकति उपचारले समाधान हुने यो समस्या यति विकराल किन भइरहेको छ ?
श्रवण २९ वर्षका भए, ऋचा २८ टेक्दै छिन् । वैवाहिक सम्बन्धको दोस्रो वर्षगाँठ गत जेठमा मनाइसकेको यो जोडी झट्ट हेर्दा हाँसीखुशी नै देखिन्छ । तर, आफूहरूमा थेरैथोक अपुग ठान्छन् उनीहरू । उनीहरूकै शब्दमा अहिलेसम्म उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकिरहेकै छैन । हरेक रातका असफल प्रयासका नमीठा अनुभवले यो जोडीलाई भित्रभित्रै जलाइरहेको छ । श्रवणको लिंग उत्तेजित नै नभइदिने समस्याले यो जोडी आजित छ ।
लगनगाँठो कसिएको अढाई वर्षसम्म पनि शारीरिक सुखको अनुभव गर्न नपाएको यो जोडी अहिले यौन परामर्शदाता डा. बद्रीप्रसाद भट्टराईसँग उपचार गराइरहेको छ । भट्टराईका अनुसार यो जोडीलाई मनोवैज्ञानिक यौन परामर्शको प्रयास भइरहेको छ । श्रवणलाई हर्मोन वृद्धि गर्नेबाहेक अरू औषधि चलाउनुपरेको छैन । ‘शारीरिक रूपमा स्वस्थ भए पनि उनीहरू यौन सुखका लागि चाहेका बेला मानसिक रूपमा तयार हुन नसक्ने समस्या छ,’ भट्टराईले भने, ‘जहिल्यै मैले यौन सुख दिन सक्दिनँ होला भन्ने नकारात्मक सोचका साथ श्रीमतीका अगाडि पुगेपछि कसरी लिंग उत्तेजित हुन्छ ?’
आफ्नी श्रीमतीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दिनँ भन्ने मनोभावले कुण्ठित बन्दै सुरु भएको सन्तोषको दाम्पत्य जीवन तीन महिनामै टुंगियो । स्कुल उमेरदेखि नै सन्तोषलाई आफ्नो लिंग साथीभाइलगायत अरूको भन्दा ‘बिचरो’ लाग्थ्यो । उत्तेजित नभएका बेला झन् सानो देख्दा उनी चिन्तित हुन्थे । ‘कतै म अपूर्ण त छैन ?’ उनलाई आफैँमाथि शंका लाग्थ्यो । डाक्टरलाई देखाए । ‘मेडिकल्ली फिट छ’ मात्र भन्ने डाक्टरको जवाफ हुन्थ्यो । यत्तिकैमा धुमधाम मागी बिहे भयो उनको ।
सुहागरात सुखद हुनुपर्छ भन्ने सुनेका थिए उनले । ‘तर, खै यति सानो लिंगले कसरी सुखद हुन सक्छ ?’ भन्ने सोचले उनको पहिलो रात निरस रह्यो । लिंगले साथ नै दिएन । दिनदिनै यो समस्या बढ्न थाल्यो । तीन महिनापछि सन्तोषकी नवविवाहित श्रीमतीले आशै मारिन् । ‘यस्तासँग जिन्दगी बित्न सक्दैन’ भन्ने नमीठो प्रहार गरेर सन्तोषलाई त्यागेको घोषणासहित माइती लागिन् ।
‘आफू साँच्चिकै अपूर्ण नै भएको हो त ?’ सुनिश्चित हुनका लागि सन्तोष यौन परामर्शका लागि डाक्टरकहाँ पुगे । बल्ल थाहा भयो– उनलाई सामान्य मानसिक समस्या नै सुरु भइसकेको रहेछ । आफ्नो अंगप्रतिको उनको असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखियो ।
उनको लिंगको आकार सामान्य नै रहेको र मानसिक कुण्ठाका कारण उत्तेजित हुन नसकेको भनेर मनोचिकित्सकले बताएपछि उनी अहिले उपचाररत छन् ।
यौन उत्तेजना समस्या महिला र पुरुष दुवैमा हुन सक्ने डा. शाक्यको भनाइ छ । महिलामा यौनक्रियाका बेला यौनांग फुल्ने तथा चिप्लो हुनुपर्नेमा सुक्खा भइदिनाले सहवास पीडादायी हुने वा सम्बन्ध स्थापित नै गर्न नसक्ने हुन्छ । पुरुषमा लिंग उत्तेजित नहुने वा चरम सन्तुष्टिसम्म पुग्न नसक्ने वा सम्बन्धमा नै सहभागी हुन नसक्ने हुन्छ ।
‘यस्तो अवस्था नै इरेक्टाइल डिस्फंकसन हो,’ डा. शाक्यले भने । यौन इच्छा कम हुने वा पटक्कै नहुने अवस्थालाई ‘हाइपोसेक्सुआलिटी’ भनिन्छ । डा. शाक्यका अनुसार यो सुरुदेखि नै उपस्थित हुन सक्छ वा केही समयको सामान्यपन पछि आउन सक्छ । यो कुनै जैविक त्रुटिबिना पनि हुन सक्छ वा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगका कारण पनि हुन सक्छ ।’
‘नपुंसकताका धेरै प्रकार हुन्छन् । यौनसम्पर्कका लागि मन हुँदाहुँदै पनि लिंग उत्तेजित नहुनु र भए पनि सम्भोगका लागि पर्याप्त समयसम्म लिंगमा उत्तेजना कायम नहुनु एक प्रकारको नपुंसकता हो,’ डा. पोखरेल भन्छन, ‘सजिलो भाषामा भन्दा लिंगमा कडापन नआउनु या छिट्टै नरम हुनु र वीर्य स्खलनको अवस्थासम्म नपुग्नु इरेक्टाइल डिस्फंक्सन हो । यो समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ । यस्तो समस्या प्रायः भइरह्यो भने डाक्टरसँग सल्लाह गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।’
‘लिंग उत्तेजित नहुने धेरै कारण हुन्छन्,’ युरोलोजिस्ट डा. सुबोध रेग्मी भन्छन, ‘लिंगमा हुने धमनीमा हुने रक्तसञ्चारको अवरोधले गर्दा पनि इरेक्टाइल डिस्फंक्सन हुने गर्छ । नपुंसकताका अरू कारण औषधि, रोग, दुर्घटना र प्रोस्टेट ग्रन्थीको शल्यक्रिया आदि हुन् । चिन्ता, वैवाहिक समस्या र उदासीनता(डिप्रेसन) ले पनि यो समस्या हुनसक्छ ।’
धेरै मानिसलाई ढल्किँदो उमेरसँगै नपुंसकता पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भ्रम हुन्छ । पुरुषमा पाइने टेस्टोस्टेरोन (जुन यौनकार्यका लागि आवश्यक हुन्छ) भन्ने हर्मोन बढ्दो उमेरसँगै शरीरमा घट्दै गए पनि शरीरमा हुनुपर्ने सामान्य तह चाहिँ रहिरहेको हुन्छ । शरीरमा बढ्दो उमेरसँगै धेरै परिवर्तन हुन्छन्, तर पनि नपुंसकता किन हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिँदैन ।
कहिलेकाहीँ नपुंसकता विभिन्न रोगले पनि हुनसक्छ । ती रोगमा प्रयोग हुने औषधिका ‘साइड इफेक्ट’ले पनि नपुंसकता हुन सक्छ । ‘तर, स्वास्थ्यवद्र्धक खानेकुरा, व्यायाम र खानपानमा सन्तुलनले उच्च रक्तचाप वा मधुमेहलाई रोक्न र निको पार्न सकिन्छ । स्वस्थ जीवन व्यतीत गरेमा यौन दुर्बलता हुन पाउँदैन,’ डा. रेग्मी भन्छन् ।